10 Toerana fialantsasatra tsara indrindra miaraka amin'ny kianja filalaovana basikety | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Toerana fialantsasatra tsara indrindra miaraka amin'ny kianja filalaovana basikety
Train Travel Austria, Train Travel Belzika, Fiaran-dalamby Britain, Train Travel China, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Train Travel UK, Travel Europe
Fijery mahatalanjona, maro loko sy mahafinaritra, misy kianja filalaovana basikety mahatalanjona any amin'ny tanàna rehetra tadiavinao hotsidihina. Raha mpilalao basikety mafana fo ianao, mpanohana, na te-hitifitra vava kely fotsiny, ireo no 10 toerana fialantsasatra tsara indrindra miaraka amin'ny kianja filalaovana basikety.
1. Fitsarana basikety 3D any Munich Alemana
Trano iray an'ny ireo kianja filalaovana baolina kitra mahavariana indrindra any Eropa, Munich dia toerana fialantsasatra mahafinaritra sy mahafinaritra. Raha te hampihatra hoops vitsivitsy amin'ny kianja filalaovana basikety mahatahotra ianao, then Munich’s 3D basketball court is where you should practice. This German basketball court dia hitondra ny lalao ho any amin'ny sehatra vaovao lumps, ary raha mahavita mikorisa eto ianao, hahomby ianao na aiza na aiza.
Raha lazaina amin'ny fomba hafa, ny kianja filalaovana basikety 3D dia hanome aingam-panahy anao hampisondrotra ny lalao. Mila mitandrina tsara amin'ireo vongan-tany manodidina ity fitsarana adala ity ianao. Ankoatr'izay, ny basikety dia ao anatin'ny fepetra lehibe amin'ny lalao rehetra, raha te hijanona ho mavitrika amin'ny fialan-tsasatrao ianao, ary mazava ho azy mitondra ny ekipanao.
Ny ankamaroan'ny mpizahatany dia mandeha any Paris hiantsena sy hanana fiainana tsara, ho an'ny fialantsasatra miala sasatra na tantaram-pitiavana. Raha toa i Paris dia toerana malaza amin'ny fialan-tsasatra manonofinofy sy mampientam-po, toerana tsara ho an'ny hetsika ivelan'ny trano koa io. Paris dia manana valan-javaboary maro ary ny renirano Seine dia an-tongotra, na bisikileta, ankoatry ny kianja filalaovana basikety miloko indrindra.
Pigalle basketball dia famoronana Nike, ill-Studio, ary marika lamaody frantsay Pigalle. Ny fiaraha-miasa nataon'izy ireo no nahatonga an'io adala io, tucked-away eo anelanelan'ny 2 kianja filalaovana basikety trano. Ny lokon'ny grenady Pigalle dia tena mahafinaritra, eo afovoan'ny tanàna manodidina an'i Paris. Io baskety io dia miasa tanteraka ary tsara ny mitifitra hoops vitsivitsy 17 Rue Duperre.
3. Fitsarana amin'ny lapan'ny tanàna an-tampon-trano Dubrovnik Kroasia
Dubrovnik dia toerana fialantsasatra mahafinaritra, voahodidin'ny fahitana ny Ranomasina Adriatika. Trano tampon-trano terra-cotta na aiza na aiza, tarehy fotsy manoloana ny ranomasina turquoise, manintona mpizahatany an-jatony isan-taona. Dubrovnik dia voahodidin'ny rindrin'ny tanàna vato, voatahiry tsara nandritra ny taonjato maro, ary toy izany koa dia iray amin'ireo kianja filalaovana basikety tsara indrindra eran'izao tontolo izao.
Ity kianja filalaovana basikety ity dia eo an-tampon'ny Lapan'ny tanàna ihany, miaraka amin'ny fahitana mahatalanjona ny Ranomasina Adriatika. Alao an-tsaina fotsiny ny fitifirana valiha misy fahitana mahatalanjona ao amin'ny Old Town sy ny faravodilanitra manga tsy manam-petra. Ny kianja filalaovana basikety an'ny City Hall eo an-tampon-trano dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo baskety lehibe indrindra manerantany.
4. Trano fanaovana basikety an'ny House of Mamba Shanghai China
Shanghai dia iray amin'ireo tanàna maoderina sy mahafinaritra indrindra eto an-tany. Skyscrapers mitsoka saina, sy ireo mari-toerana lehibe kokoa noho ny fiainana, ary ambonin'izany rehetra izany dia ny kianja filalaovana basikety an'ny House of Mamba, nataon'i Nike. Ity kianjan'ny basikety epic ity dia mahafinaritra sy manavao, natao tsara ho an'ny iray amin'ireo toerana fialantsasatra tsara indrindra eto an-tany.
Ny kianja filalaovana basikety House of Mamba Shanghai dia kianja filalaovana basikety feno habe efa vonona tanteraka ho an'ny lalao tsara indrindra ho anao. Natao ho an'ny fitsangatsanganana Nike Rise any Shina ny fitsarana, ary ho gaga ianao amin'ny fahitana taratra LED. Noho izany, ny dingana rehetra ataonao amin'ny hoop dia manazava ny gorodona, ary gaga ny vahoaka.
5. Fitsarana Brighton Beach England
Morontsiraka volamena Sandy, promenade mahafinaritra, ary rivotra madio, Brighton dia toerana fialantsasatra lehibe. Raha i Angletera dia fantatra amin'ny habakabaka fotsy, Brighton dia fialantsasatra mahafinaritra any amoron-dranomasina. Ny toerana amoron-dranomasina Brighton dia mahatonga azy io ho an'ny hetsika ivelany.
Fialantsasatra mitifitra ambanin'ny masoandro ary na dia mitsambikina avy any amin'ny fitsarana mahitsy mankamin'ny ranomasina aza dia traikefa mahatahotra. Ny kianja filalaovana basikety any Brighton dia misy fepetra lehibe amin'ny karazana mpilalao na lalao. Noho izany, raha mitady be fialan-tsasatra mavitrika, baskety, lomano, ary ny miala sasatra eny amoron-dranomasina dia fomba iray miala sasatra ary hampiakatra ireo haavon'ny angovo ireo indray.
Afaka mandany ianao 8 andro any London, ary mbola tsy mahita ny zavatra rehetra atolotry ity tanàna mahavariana ity. Manomboka amin'ny fiantsenana ka hatramin'ny kanto sy mozika, London dia toerana fialantsasatra tsara ho an'ny Solo mpandeha sy fianakaviana. Ary noho izany, tsy hahagaga anao izany fa tanàna tsara i London hetsika ivelan'ny trano, miaraka amin'ny valan-javaboary mahatahotra sy ny reniranon'i Thames.
Ny Regal & Ny kianja filalaovana basikety any Jordania ao amin'ny reniranon'i Thames dia kianja filalaovana basikety any ivelany mahatahotra. Ankafizin'ireo mpilalao ny tsio-drivotra mamelombelona avy any amin'ny renirano eo anelanelan'ny lalao ary afaka manafosafo ny fahitana ny renirano sy ny tanàna. Ary, ny volavolan'ny fitsarana dia manome conditi0n ambony misy tadin-tànana azo ovaina azo zahana ary gorodona Nike modely ho an'ny lalao milamina sy tsy misy ratra.
7. Kianja Basketball Belgian ao Aalst
Mahafinaritra amin'ny fararano, tena be olona tamin'ny Desambra, rehefa mpizahatany an-jatony tonga amin'ny festival Aalst fanao isan-taona, misy antony hafa hitsidihana an'i Aalst mandritra ny taona. Ny iray amin'ireo zavatra mahavariana indrindra eto dia Kianja basikety misy loko maro an'i Aalst, ny asan'ny artista Katrien Vanderlinden. Miaraka amin'ny endriny maro loko samy hafa, Vanderlinden dia nampiorina ny kantony tamin'ny lalao ankizy, Blocks lojika.
Noho izany, Aalst dia toerana fialantsasatra tsara foana, ary ity kianja filalaovana basikety vaovao ity no tsara indrindra amin'ny fanarahana ny fanazaran-tena mandritra ny fialan-tsasatra. Tsy vitan'ny hoe, Fa ny endrika dia mahatalanjona tokoa ary mendrika ny dia mandritra ny adiny iray avy any Bruxelles mba hankafizanao fotsiny ny iray amin'ireo kianja filalaovana basikety tsy manam-paharoa indrindra any Eropa.
Miaraka amin'ny fahitana Panoramic Pacific, tendrombohitra maitso mavana, sy ny toetrandro tropikaly, Costa Rica dia paradisa ho an'ny mpandeha rehetra. Mipetraka fotsiny mijery ny faravodilanitra, na ny mandeha eny amoron-dranomasina dia hametraka anao amin'ny fomba miala sasatra.
Costa Rica no tanjon'ny olon-drehetra fialan-tsasatra nofinofy, fialan-tsasatra na fialam-boly ary fialamboly ivelany. Ary noho izany, tsy mahagaga raha ny iray amin'ireo villa fialan-tsasatra mahavariana indrindra dia misy kianja filalaovana basikety mahafinaritra. Finca Austria Villa-anay manana kianja filalaovana basikety mahatalanjona izay mijery ny Pasifika sy ny dobo filomanosana. Inona koa no ilain'ny olona amin'ny fialan-tsasatra mahafinaritra?
9. Fitsarana basikety any Hong Kong
mavitrika, zava-baovao, mampientam-po, ary mahafinaritra, Ny kianja filalaovana basikety any Hong Kong dia malaza tahaka ny tranony ihany. Hong Kong dia iray amin'ny ireo toerana tsara hitsidihana any Sina misaotra ny toetrany cosmopolitan. Avy amin'ny fomba fijery mahafinaritra ka hatrany amin'ny morontsiraka sy ny fitsangantsanganana manodidina ny nosy, Hong Kong mahatonga ny tsirairay hiverina hatrany hatrany. Goavana ny kianja filalaovana basikety any Hong Kong, vaovao, maro loko, ary miorina ao a mpiara-monina lehibe.
Ny basikety Choi Hung Estates dia iray amin'ny baskety tsara indrindra any Hong Kong. Ary, izy io koa dia iray amin'ireo toerana mareva-doko, tena mety ho an'ny sary mahafinaritra. Raha mbola tsy nitsidika an'i Hong Kong ianao, azo antoka ny famandrihana dia mankany amin'ity toerana mahavariana ity, izany dia iray amin'ireo 10 toerana fialantsasatra tsara indrindra miaraka amin'ny kianja filalaovana basikety.
10. Tempelhof Basketball Court Berlin
Ny fialamboly any ivelany dia ny valan-javaboary Tempelhof feld park. Avy amin'ny bisikileta amin'ny basikety, na mangatsiatsiaka fotsiny, Tempelhof no toerana mety indrindra amin'ny fiainana haingana any Berlin. Berlin dia manana fiainana alina mahafinaritra ary tena sariaka amin'ireo mpitsidika azy rehetra, noho izany tsy mahagaga ny fikasan'ny tanàna handraisana ny rehetra.
Berlin's Tempelhof basketball dia iray amin'ireo kianja filalaovana basikety lehibe any Eropa. Eo amin'ny fidirana, amin'ny faritra fitsangantsanganana, ary voahodidin'ny hazo sy ahitra maintso, ity kianja filalaovana basikety ity dia hahatonga anao hahatsapa ho mahatalanjona amin'ny fofonaina rehetra.
Izahay ao Save A Train dia ho faly hanampy anao handamina fitsangatsanganana amin'ireny 10 toerana fialantsasatra tsara indrindra miaraka amin'ny kianja filalaovana basikety.
Do you want to embed our blog post “10 Best Holiday Locations With Great Basketball Courts” onto your site? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmg%2Fholiday-locations-basketball-courts%2F- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
baskety BasketballCourt BasketballCourts bestbasketballcourtseurope playbasketballeurope